Ànyị Kwesịrị Ịtụ Setan Bụ́ Ekwensu Egwu?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Mam Maya Mazatec (Huautla) Moore Nahuatl (Central) Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Zande Zulu
A naghị ahụ ikuku ọjọọ a na-akpọ kabọn monozaịd anya. Otú ahụ ka a na-anaghị ahụ Setan anya
E nwere ikuku ọjọọ a na-akpọ kabọn monọzaịd. Ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịmata ebe ikuku a dị n’ihi na a naghị ahụ ya anya, ọ naghịkwa esi ísì, mmadụ nwekwara ike ikuru ya n’amaghị ama. O nwere ike ịbụ na e kee ndị niile ikuku ọjọọ na-egbu n’ụwa ụzọ abụọ, ọ bụ ikuku a na-egbu ihe karịrị otu ụzọ. Ma, nke a ekwesịghị ime ka obi koro anyị n’elu n’ihi na e nwere otú mmadụ nwere ike isi mata ebe ikuku ọjọọ ahụ dị. E nwekwara ihe ị ga-eme ka ọ ghara imerụ gị ahụ́. Ọtụtụ ndị nwere ihe na-eme ka ha mata ebe ikuku ahụ dị. Ha mata, ha emezie ihe ha kwesịrị ime ka ọ ghara imerụ ha ahụ́.
Setan dị ka ikuku ọjọọ ahụ. Ndị mmadụ enweghị ike ịhụ ya anya n’ihi na ọ bụ mmụọ, ọ bụkwa onye ọjọọ. Ma, anyị ekwesịghị ịtụ Setan egwu n’ihi na Chineke na-enyere anyị aka. Chineke nyere gị ihe ndị na-esonụ ga-eme ka Setan ghara imeri gị.
Ọ bụ gị ga-ekpebi ihe ị ga-eme. Jems 4:7 gwara anyị, sị: “Na-eguzogidenụ Ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n’ebe unu nọ.” Ọ bụ eziokwu na Setan dị ike, ma ọ gaghị amanyeli gị ka i mee ihe ị na-achọghị ime. Ọ bụ gị ga-ekpebi ihe ị ga-eme. Pita nke Mbụ 5:9 sịrị: ‘Guzogidenụ Ekwensu, sienụ ike n’okwukwe.’ Cheta na Setan hapụrụ Jizọs mgbe ọ na-achịtaghị ájá n’ọnwụnwa atọ ọ nwara Jizọs. (Matiu 4:11) Gịnwa nwekwara ike ikpebi na Setan agaghị anwata gị.
I nwere ike ịbụ enyi Chineke. Jems 4:8 gwara anyị, sị: “Bịaruonụ Chineke nso.” Jehova chọrọ ka ị bụrụ ezigbo enyi ya. Ma, olee ihe ị ga-eme ka ị bụrụ enyi ya? Otú kacha mma ị ga-esi amalite bụ isi na Baịbụl mụtakwuo banyere Jehova. (Jọn 17:3) Ihe ndị ị na-amụta banyere Jehova ga-eme ka ị hụ ya n’anya, ọ bụrụ na ị hụ ya n’anya, ị ga na-eme ihe ọ chọrọ. (1 Jọn 5:3) Mgbe ị na-agbalị ka ị bụrụ enyi Nna gị nke eluigwe, olee ihe ọ ga-eme? Jems kwuziri na ‘Chineke ga-abịarukwa gị nso.’
Jehova na-enye gị ihe ga-eme ka Setan ghara imebi ofufe ị na-efe Jehova
Chineke kwuru na ọ ga-echebe gị. Ilu 18:10 sịrị: “Aha Jehova bụ ụlọ elu siri ike. N’ime ya ka onye ezi omume na-agbaba, e wee chebe ya.” Ihe a Baịbụl kwuru apụtaghị na aha Chineke bụ ọtụmọkpọ. Kama ọ pụtara na ndị ji obi ha niile na-akwanyere aha Chineke ùgwù nwere ike ịrịọ ya mgbe ọ bụla ka o chebe ha.
Ihe Ndị Kraịst mere ga-enyere gị aka. Ọrụ Ndịozi 19:19 gwara anyị ihe ndị bi n’Efesọs mere mgbe ha ghọrọ Ndị Kraịst. Ọ sịrị: “N’ezie, ọtụtụ ndị na-eme anwansi chịkọtara akwụkwọ ha ma kpọọ ha ọkụ n’ihu mmadụ niile. Ha wee gbakọọ ọnụ ahịa ha wee hụ na o ruru puku mkpụrụ ego ọlaọcha iri ise.” * Ndị Kraịst ahụ mebisịrị ihe niile ha ji eme mgbaasị n’agbanyeghị ego ole a na-ere ha. Ihe a ha mere nwere ike ịbara anyị ezigbo uru taa. Ndị na-eme anwansi na mgbaasị jụrụ ebe niile n’ụwa anyị a. O nwere ike ịdị mmadụ ka o nwechaghị ihe dị njọ n’ime mgbaasị ma ọ bụ na ihe ndị e ji eme mgbaasị adịchaghị njọ. Ma, ha nwere ike ime ka ndị mmụọ ọjọọ kpatara gị nsogbu. N’ihi ya, i kwesịrị ime ihe niile i nwere ike ime ka i zere ime mgbaasị na ihe ọ bụla e ji eme ya.—Diuterọnọmi 18:10-12.
Rogelio, bụ́ onye e kwuru okwu ya n’isiokwu mbụ gbara n’Ụlọ Nche a, ekwetaghị na Ekwensu dị adị ruo mgbe ọ karịrị afọ iri ise. Ma, o mechara gbanwee echiche ya. Gịnị mere o ji gbanwee ya? Rogelio kwuru, sị: “M nwetara Baịbụl, bụ́ ihe m na-emetụbeghị ná ndụ m. Ihe m mụtara na ya mere ka o doo m anya na Ekwensu dị adị. Ihe ahụ m mụtara na-enyere m aka ugbu a ka Ekwensu ghara ịnwata m.”
‘Ihe m mụtara na Baịbụl mere ka o doo m anya na Ekwensu dị adị. Ihe ahụ m mụtara na-enyere m aka ugbu a ka Ekwensu ghara ịnwata m’
Ị̀ ga-achọ ịnọ ndụ mgbe Setan na-agaghịzi adị? I nwere ike ịnọ ndụ mgbe ahụ. Akwụkwọ Nsọ kwuru ihe ga-emecha mee Ekwensu, bụ́ onye na-eduhie ọtụtụ ndị mmadụ. Ọ sịrị na a ga-atụba Ekwensu “n’ime ọdọ ọkụ na sọlfọ.” (Mkpughe 20:10) N’eziokwu, o nweghị ihe ọkụ na sọlfọ nkịtị ga-emeli mmụọ a na-anaghị ahụ anya. Nke a gosiri na ọdọ ọkụ ahụ pụtara mbibi ebighị ebi. A ga-ebibi Setan, ya anwụọ pịị. Ndị niile hụrụ Chineke n’anya ga-enwe ezigbo obi ụtọ n’oge ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, na-agbalị ike gị niile ka ị na-amụtakwu banyere Jehova na iwu ya. * Chegodị otú obi ga-adị gị ịnọ ndụ mgbe a ga-asị n’eziokwu na “Setan adịghị.”
^ para. 8 Ọ bụrụ na mkpụrụ ego ọlaọcha ahụ bụ ego ndị Rom a na-akpọ dinarịọs, ọ pụtara na ego ahụ bụ ego ole a ga-akwụ puku ndị ọrụ iri ise n’ụbọchị. Ọ bụghị obere ego.
^ para. 11 Ị chọọ ịmatakwu ihe Baịbụl kwuru banyere Setan na ime mgbaasị, gụọ isi nke 10 n’akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Gwa Onyeàmà Jehova ọ bụla ị hụrụ ka o nye gị ya ma ọ bụ gị agụọ ya na www.jw.org/ig.